Shir isxogweraysi ah oo dhexmarey Xisbiyada Siyaasada ee sida KMG ah loo diiwaangaliyay iyo GMDQ – GMDQ
Shir isxogweraysi ah oo dhexmarey Xisbiyada Siyaasada ee sida KMG ah loo diiwaangaliyay iyo GMDQ
Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan isxogwareysi ah oo u dhaxeeyay Xisbiyada Siyaasada iyo Guddiga Madaxbannan ee Doorashooyinka Qaranka.
Ugu horeyn waxaa shirka furtay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Mrw, Xaliimo Ismaaciil oo sheegaty in Guddigu soo dhaweeynayo kulamada noocan oo kale ah islamarkaana sheegtay in ay muhiim tahay in xisbiyada Siyaasada iyo Guddigu ay kala warqaataan.
Guddoomiye Xaliimo waxay warbixin dheer kabixisay hawlaha u diyaargarowga Doorashada 2020 ee uu Guddiga Doorashadu ku hawlanyahay iyadoo sheegtay in horumaro badan laga sameeyay diyaargawoga dhanka farsamada balse ay jiraan hawlo badan oo dib u dhac kujira tasoo ay sheegatay in ay ku xirantahay awoodo ka baxsan gacanta Guddiga sida shuruucda iyo dhaqaalaha ku baxaya Doorashada. waxeyna intaasi ku dartay in hada ay socdaan dadaalo badan oo lagu soo dhamaystirayo shuruucda muhiimka ah sida sharciga doorashada.
Waxay ka warbixisay Gudoomiye Xaliimo kulan uu Guddigu Doorashada uu la qaatay Ra’iisul wasaaraha Xukuumada Federalka iyadoo sheegtay in Ra’iisul wasaaraha ay u bandhigeen hawlaha muhiimka ah ee loo baahanyahay in Xukuumadu ay kala shaqeyso kuwaas oo ay kamid ahaayeen meel marinta shuruucda qabyada ah ee Doorashada, dhaqaalaha loo bahanyahay in lagu fuliyo hawlaha doorashada iyo xafiisyadii uu Guddiga ku shaqeyn lahaa sida xarunta dhexe iyo xafiisyada Gobolada ee Guddiga. waxayna sheegtay in Ra’iisul Wasaaruhu ballan qaaday in baahiyaha uu Guddigu soo jeediyay muhiimad gaar ah ay siin doonto xukuumadu.
Dhinaca kale Guddoomiye Xaliimo ay sheegtay in loo baahanyahay in Xisibiyada laf ahaantooda ay muhiim tahay in ay isu diyaariyaan in ay doorashada ka qaybgalayaan taasoo ififaale fiican u noqonaysa in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo.
Waxaa shirka lagu soo bandhigay warbixin uu Guddiga Doorashada ka diyaariyay Kormeer uu Guddiga ku soo sameeyay Xisbiyada Siyaasadeed ee sida KMG loo diiwaangaliyay iyadoo kormeerka loogu kuurgalayay sida Xisbiyadu u shaqeeyaan, xarumadaha ay ku shaqeeyaan iyo waliba sida ay u dhaqangaliyaan mabaadiida iyo xeerarka ay tahay in ay ku shaqeeyaan.
Warbixinta la soo bandhigay ayaa si guud waxaa loogu xusay inta badan xisibiyadu qaadeen talabooyin muhiim ah oo ay isku dhisayaan balse marka laga fiirsho dhinacyada qaarkoodna uu jiro gaabis iyo diyaargarow la’aan.
Kusimaha Xafiiska Diiwangalinta xisbiyada oo shirka ka hadlay aya sheegay in warbixintan ay tahay mid si guud xisbiyada loogu soo bandhigay balse ay jiri doonto in Xisbi kasta gaarkisa loola wadaagi doono warbixintiisa gaarka ah.
Guddiga Doorashooyinka ayaa dhinaca kale waxaa uu Xisbiyada Siyaasadeed wadatashi kala yeeshay habka diiwaangalinta cobixiyeyaasha iyadoo shirka lagu soo bandhigay daraasad laga sameeyay hababka diiwaangalineed ee loo isticmaalo diiwangalinta codbixiyaha kuwaas oo gaarayay ilaa 5 nooc.
Khadija Cosoble oo kamid Guddiga Doorashooyinka ayaa sheegtay in Guddigu daraasad ka sameeyay sida diiwangalinta loo samayn karo iyadoo daraasadan laga qaybgaliyay dhinacyo badan oo muhiim ah sida Madaxda qaranka, hay’adaha sharcidajinta iyo Dawlad goboleedyada, waxay sheegtay in inta badan dadkii laga qaybgaliyay daraasada ay soo jeediyeen in habka diiwangalinta electronicga ah ay tahay mid ugu haboon looguna kalsoonida badanyahay.
Intii uu shirku socday ayaa waxaa la sameeyay dood kooxeedyo ay si wadajir ah uga qaybqaadanayeen madaxda Xisbiyada Siyaasada iyo Guddiga Doorashada kuwaas oo lagu lafogurey warbixinadii lagu soo bandhigay shirka
Xisbiyada qaar oo talooyin ka dhiibtay noocyada diiwangalineed ee la soo bandhigay ayaa sheegay in marwalba loobaahanyahay in go’aanka la gaarayo iyo nooca la xulanayo uu yahay mid ka tarjumaya sida uu ula jaanqaadayo duruufaha iyo xaaladaha gaarka ah ee dalkeenu qabo.ugu damneyn Guddiga iyo Xisbiyada ayaa isku raacay in kulamada noocan oo kale ah la xoojiyo si ay u sahlanaanto iska warheynta Guddiga iyo Xisbiyada.
Waxaa la faafiyey March 9, 2019 March 9, 2019